Bathroom Faucets Vidima: yokudzokorora uye mutengi inofambiswa
Homeliness, Bath kana shawa
imba imwe neimwe ane tepi muimba yokugezera uye mukicheni, saka hazvishamisi kuti kudiwa zvigadzirwa izvi ndizvo chaizvo. Pakati siyana zvigadzirwa vaibayira musika pombi dzemvura Vidima mavanga Bulgarian kugadzirwa aifanira kuravidza kuti vatengi.
High chigadzirwa unhu Bulgarian mugadziri
Enterprise, izvo yakabereka faucets nokuda yokugezera Vidima, nokuti anenge 100 nemakore. Panguva yose iyi kugadzirwa zvigadzirwa kubva vatengi kwose yakakwirira mavanga nokuda mukurumari uye unhu.
The anofungidzirwa mutengo chete mhikuriso tepi mienzaniso Vidima «Orion" dzino B4227AA - 3290 rubles. Pakati dzakawanda zvikuru Vagadziri ichi Bulgarian boka ndechimwe vashoma, iyo rinobudisa mashoko pamusoro wayo kugadzirwa zvinhu. zvedongo cartridges zvakagadzirirwa dzinenge mamiriyoni 1 zvinogara. Mutengi pakarepo kunzwisisa zvinenge zvakawanda sei uchashumira chisanganiso Vidima yokugezera pamwe zvikuru kana kunwa zvine.
Kazhinji, Bulgaria anozivikanwa kunyatsoita kwayo kusvikira chatingatevedzera kurwira nhumbi ekisipoti. zvigadzirwa zvose asati zvichakurukurwa pa "dare nevatengi", vari kuedzwawo chaiyo mumarabhoritari.
The kambani Vidima hapana chinangwa kurova makwikwi tichitarisa functionality nezvimwe zvinofadza. Panyaya iyi, kusimbisa iri nyaradzo uye nyore, ichiita mabasa akawanda magadzirirwo chokupika ergonomics. Kushaikwa kunoratidzei inobvira kana wakadzikama uye nyore nechitarisiko.
Faucets kugeza Vidima kuumbwa rinokosha mabikirwo hwakavimbika uye rakasimba chiwanikwa kuti zingi uye mhangura. Nemhaka Chrome kumugumo, chigadzirwa haisi pasi kusimbisa ngura uye migumisiro kwemakemikari nevamiririri.
Nakidzwa zvikomborero chigadzirwa Chokwadi, zvinobvira chete pashure pachako rokuongorora uye kwenguva refu oparesheni, asi kuti chinangwa ongororo uye inofambiswa kubva vatengi vanogona kunzwisisa chii Vidima zvokushandisa.
Chinonyanya akakurumbira pakati vatengi Bathroom Faucets Vidima anotevera kuunganidza:
Runko. The inonyanya kufarirwa series, sezvamakaropafadzwa chepakutanga kugadzira. Models vane swivel muromo uye rectifier chinja. Complete ane yokugezera mixers vari nenhumbi.
Uno. No zvishoma dzakakurumbira yokutevedzera pamwe chete-mhikuriso chinja.
Practik. Feedback kubva vatengi, muunganidzwa ichi zvakakwana anosimbisa zvinoshanda unhu dzayo, iyo kambani inoti iri rokuremekedza. The muunganidzwa zvinosanganisira nyaya vane dvuhventilnye actuators haizoshandisi.
"Seva". Zvinonzi zvinoshanda mari iyi.
"Tarner." muunganidzwa ichi vanoda vatengi vanokoshesa nyaradzo uye functionality. Nyaya iri kuonekwa vapfumi.
Izvi chete dzakaunganidzwa zvikuru akakurumbira pakati vatengi, asi kana mukabata zvakadzama kudzidza mumwe muenzaniso, zvinokwanisika kuti vakawanda mhedziso kuti Vidima zvigadzirwa vari dzakanaka uye nyore kugadzira. Izvi zvinobvumira iwe kuti chigadzirwa nokudenga, asi kuti haisi pfungwa. The mugadziri akasarudza kunyatsoteerera kunaka zvigadzirwa zvavo, saka kuti riwanikwe zvose nokuda kwomutengo.
Kuti sarudza vatengi
Bathroom anoshandisa hunyambiri chisanganiso ane yokugezera kana chimwe - pamusoro singi. Modern mhando vane otomatiki rakavharwa-kure maitiro uye thermostat.
Vaiona chakavimbika kupfuura mixers takashongedzerwa pamwe zvedongo discs, izvo musarasikirwe pamusoro anotsvedzerera kutenderera nguva. Achitendeukira dhayamita zvedongo katuriji - 35, 40 uye 47 mm.
Vatengi vakawanda vari kutsvaka munhu chaiwo shanduro chisanganiso pasina zvisingakoshi frills uye mufashoni magadzirirwo. Chisarudzo ichi hunogona kungoparara kutsanangurwa, nokuti utsanana michina rakagadzirirwa kuramba ichishanda, uye kutevera nefashoni vakawanda kuchenjera. Naizvozvo Vidima muchiso zvigadzirwa vava Mudikamwa zvevanhu wechokwadi:
Kwemakore matatu garandi.
Unhu izvi aiti nokuda mugadziri uye kupupurirwa vatengi.
faucets All nokuti yokugezera Vidima vachinzwisisa Pazvinoitika aerator kuti kunoita mvura achidyisa vaingoramba pasi chero kumanikidzwa.
Tichifunga akwegura ari mugadziri (anopfuura 70 years) uye kukura kudiwa zvigadzirwa, tinogona zvakachengeteka kutaura yepamusoro kwayo uye rakavimbika. The chisanganiso zvakakodzera kuisa kunyange chiduku azvipire mvura nevezera. Ndicho chete nyaya, kana munhu European unhu haumanikidzwi overpay. MuRussia, kambani ine mahofisi muMoscow, St. Petersburg uye mamwe maguta akawanda.
Chii vanoti kasitoma wongororo?
Kana pane sarudzo kutenga kana kwete kugeza chisanganiso Vidima, mutengi wongororo - ndiyo anongoda bedzi mashoko anokosha, kunotsigira vanhu pakusarudza chigadzirwa. Naizvozvo, hapana yokudzokorora pasina zvakazara uongororwe haazovanzwiri. It akakurudzira kana kutenga rokuongorora kwete chete chigadzirwa pacharo, asiwo kavha. Nokuti kana that no wired kavha mabhegi, zvinoreva kuti mashoko zvatsiviwa Kunyepa, asi kunotoitika unongotaura matambudziko.
Kana uchisarudza yokugezera Fixtures, zvose kazhinji kudzorwa maitiro akadai functionality, high quality, akavimbika uye magadzirirwo. Tora somuenzaniso womuenzaniso Vidima Retro. Installs mumaminitsi, ane zvose zvokushandisa rwaunoda kuti uzere kushandiswa uye kugadzwa.
Vanozvishandisa kunakidzwa yokugezera tepi Vidima muenzaniso uyu nokuda anotsvedzerera mitsetse kwedzinde pamwe nemvura iri kondo uye shure, uyewo yakajeka kushanda mavharuvhu inotonhora uye kupisa mvura. Kubva haina kana, kutaura zvazviri, crudity vatengi emit kudziyisa inopisa mvura vharafu uye ruzha chisanganiso zvaoma simba. Uyewo, muenzaniso uyu zvinoda chimwezve firita.
Repair pamusoro faucets
Nokutenga utsanana chigadzirwa, mumwe User anotarisira rakavimbika uye dambudziko isina kushanda kwenguva yakareba. Zvisinei, kunyange bedzi womuenzaniso angatadza uye pakupedzisira kupinda yakapararawo, saka chakaipa kutaura kuti: Vidima faucets nokuti yokugezera ane yokugezera - a rakasimba chigadzirwa kuti haumbofi kuvhuna, kunyange vose zvavo yepamusoro unhu.
Asi kunyange kukundikana Bulgarian zvigadzirwa ari mugadziri anoratidza divi rakanaka. Zviri kuti kugadziriswa pakati chisanganiso Vidima kuchimbuzi anogona nyore kuitwa noruoko. vanozvishandisa ayo akati chete kutevedzera kunenge uye mirayiridzo nekukatanura chikwata nomazvo.
Kusarudza ano mutengi
Kutonga nezvinooneka wongororo, zviri pachena kuti ano mutengi haadi overpay nokuda zvizivikanwe, sverhfunktsionalnost umo aisafanira nayo, uye refu garandi. Nhasi, kudiwa zvibereko high quality, hwakavimbika uye zvakasikwa nepurani.
hondo neimwe kana hositesi anoda kuti kushanda zvakanaka kwemakumi emakore chisanganiso nokuda kicheni uye chimbudzi, izvo haatarisiri kunyatsotarisirwa.
"Kaldevey" - German simbi dzokugezera: zvayakaita, mifananidzo, zvinhu uye wongororo
Magadzirirwo chiedza muimba yokugezera
Outdoor kugeza chisanganiso: STRUCTURAL zvinhu uye kugadzwa
How kusarudza tepi nokuda yokugezera uye haana kuita chikanganiso
Nzvimbo yemagetsi ruoko Dryer?
The kuziva yokutanga pamwe BMW 530
Mashoko pamusoro shamwari. Mashoko pamusoro shamwari uye ushamwari zvinoreva
Waterpark muna Montenegro: tsananguro hotera nemvura mabasa
Mountain mbudzi - akazvarwa mukwiri
Nomupedzachose pamusoro mudhudhudhu nemaoko ake
Monoblock Dell: kuongororwazve yokutevedzera, wongororo
Chii hyperthyroidism? Zviratidzo vakadzi, zvinokonzera, zviratidzo uye kurapwa
Kukura pamubhedha yomucheka. Buy zvinhu zvakakodzera
Medplaya Santa Monica 3 * (Calella, Costa Del Maresme): rondedzero hotera, mabasa, wongororo
"Cow": pfupiso. "Cow" Platonov: protagonists
"Mwana Akanaka" - mbatya, yakakodzera mwana wako!
Ko munyengetero rubatsiro kuti basa?